Ukuphathwa Kwemikhiqizo: Ukuthula kuyimpumelelo evame ukungakhokhelwa | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJuni 26, i-2007 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Ukuba yiMenenja yoMkhiqizo we-Inc 500 SaaS inkampani ibilokhu igcwalisa futhi inenselelo emangalisayo.
Ngabuzwa kanye ukuthi ngabe sikhona yini esinye isikhundla enkampanini engingathanda ukuba naso… ngokuthembeka, asikho isikhundla esingcono kuneMenenja yoMkhiqizo. Ngisola ukuthi abaphathi beMikhiqizo kwezinye izinkampani ze-software bayavuma. Uma uzibuza ukuthi iMenenja yoMkhiqizo yenzani, izincazelo zomsebenzi ziyahlukahluka kakhulu kuye ngenkampani.
Kwamanye amabhizinisi, iMenenja yoMkhiqizo iqondisa futhi ingumnikazi womkhiqizo wayo futhi ibhekele impumelelo noma ukwehluleka kwalowo Mkhiqizo. Emsebenzini wami, iMenenja yoMkhiqizo iyaqondisa, ibeke phambili, futhi isize ukuklama izici nokulungiswa endaweni yesicelo esibhekene nayo.
Impumelelo ayinakulinganiswa njalo ngama-dollar namasenti. Kuvame ukukalwa ngo- ukuthula. Amadola namasenti azokutshela ukuthi izici zakho zincintisana kangakanani embonini, kepha ukuthula yisilinganiso sangaphakathi sempumelelo:
Ukuthula okuvela kumaThimba Wentuthuko afunda Izidingo zakho Namacala Okusebenzisa futhi akwazi ukukuqonda nokukusebenzisa.
Ukuthula okuvela kumaqembu wokumaketha abona inani lomkhiqizo wakho futhi ongakufanekisa ngokubonakalayo.
Ukuthula okuvela emaQenjini Wokuthengisa abamatasa ngokuthengisa kubathengi abadinga izici zakho.
Ukuthula okuvela emaQenjini Wokuqalisa okumele achaze izici zakho futhi azisebenzise ngamakhasimende amasha.
Ukuthula okuvela kumaThimba Wenkonzo Yamakhasimende okufanele aphendule izingcingo futhi achaze izinkinga noma izinselelo ezihambisana nezici zakho.
Ukuthula okuvela emaQenjini okuSebenza koMkhiqizo okufanele abhekane nezidingo ezifakwa yizici zakho kumaseva nakumkhawulokudonsa.
Ukuthula okuvela emaqenjini obuholi okungaphazanyiswa amaklayenti abalulekile ekhononda ngezinqumo zakho.
Ukuthula kuvame ukungakhokhelwa
Inkinga ngokuthula, kunjalo, ukuthi akekho oyibonayo. Ukuthula akunakulinganiswa. Ukuthula ngokuvamile akukutholeli amabhonasi noma ukukhushulwa. Ngidlule ekukhishweni okukhulu okuningi manje futhi ngibusiswe ngokuthula. Isici ngasinye engisisebenze namaThimba Wentuthuko ukuklama nokusebenzisa siholele ekuthengisweni okungeziwe futhi akukho kwanda ezindabeni zokuhlinzekwa kwamakhasimende.
Angikaze ngihlonishwe ngalokhu… kepha angilungile ngalokho! Ngiyazethemba kakhulu emakhonweni ami kunangaphambili. Uma ukuphela komsila kuthula, ngiyakuqinisekisa ukuthi kukhona umsindo omningi ngaphambili. Ukuba yiMenenja yoMkhiqizo ephumelelayo kudinga uthando olukhulu nezimfuno esigabeni sokuhlela sokukhishwa kanye nezimpawu zomgwaqo. NjengeMenenja Yomkhiqizo, uvame ukuzithola ungqubuzana nabanye Abaphathi Bomkhiqizo, Abaholi, Abathuthukisi, ngisho namaklayenti.
Uma ungemi ekuhlaziyweni nasezinqumweni zakho, ungafaka amakhasimende akho engcupheni, amathemba akho nekusasa lenkampani yakho nemikhiqizo yakho. Uma umane uthi yebo kuzidingo zobuholi noma izidingo zonjiniyela, ungabhubhisa isipiliyoni somsebenzisi wamakhasimende akho. Imvamisa ungazithola usuphikisana nomphathi wakho nozakwabo.
Ukuphathwa Komkhiqizo akuwona umsebenzi wawo wonke umuntu!
Lokho kuyingcindezi enkulu futhi kudinga abantu abangasebenza kuleyo ngcindezi benze izinqumo ezinzima. Akulula ukubheka abantu ebusweni ubatshele ukuthi uhamba ngenye indlela nokuthi kungani. Kudinga abaholi abaqinile abazokusekela futhi bakwenze uziphendulele ngempumelelo noma ukwehluleka komkhiqizo wakho. Abaholi ababeke ithemba labo kuwe ukwenza izinqumo ezifanele.
Kudinga nokwazisa ukuthula.
Zikuphi izindawo zokudlela ezihlinzeka ngabodwa?
Jun 26, 2007 ku-7: 10 PM
Angikwazi ukuvumelana nawe ngaphezulu. Ama-PM ahamba phambili yiwo angatholi ukuqashelwa.
Jun 27, 2007 ku-6: 51 PM
UDoug uwubethele ngalokhu okuthunyelwe. Yize abanye behalela impendulo (ngiyayenza), ukuthula empeleni kuyindlela yokuphendula engabhekwa njenganingi. Futhi ukuqashelwa? Amakhono ama-HR alula azinakwa ngabaphathi abaningi, abangaqapheli ukuthi ukuphawula okulula okulula kungabuthinta kanjani ubuntu babasebenzi babo.
Jun 28, 2007 ku-8: 57 PM
Kuyathakazelisa! Akukho ukuqashelwa nokuthula okungcono kunokuqashelwa njengendoda ekhuphule yonke into phezulu - ngenkathi yenza umsindo omkhulu. Usazoba nomsebenzi ekuseni! Kepha, kusamele wenze umsindo, qiniseka ukuthi abantu bazi ukuthi usakhahlela.
I-Oct 12, i-2008 ku-8: i-43 PM
Mnumzane, Ukuthula kimi kuyikhwalithi ebaluleke kakhulu noma engaphansi kakhulu. Umvuzo wokuthula ucacile kepha uma uvumelanisa nobuntu nomsebenzi owenziwe ngumuntu… Kungaba yindawo yokuThuthukiswa koMkhiqizo noma kungenjalo…